Budata Xvirus Personal Guard maka Windows
Budata Xvirus Personal Guard
Free Budata maka Windows (1.96 MB)
Budata Xvirus Personal Guard,
Xvirus Personal Guard bụ sọftụwia antivirus efu ị nwere ike iji chebe kọmputa gị pụọ na nje.
Mgbe ụfọdụ kọmputa anyị na -aghọ ihe a na -agaghị ahụ anya nihi nje ndị a na -ebute na ịntanetị ma ọ bụ site na ngwaọrụ mkpanaka dịka osisi USB. Ngwanrọ ọjọọ a, dị ka Trojans, ikpuru, keyloggers, bots, na -achịkwa akụkụ nke kọmpụta anyị dị ka onye njikwa ọrụ, ihe na -ewepụ ihe na ntọala DNS wee gbochie anyị iwepu ha site na igbochi ịnweta akụkụ ndị a. Na mgbakwunye, ha na -ezuru okwuntughe anyị nke anyị na -abanye na kọmpụta anyị ma napụ anyị akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta anyị.
Iji gbochie ọnọdụ dị otu a, ọ dị mkpa ịwụnye ngwanrọ antivirus na kọmputa anyị taa. Xvirus Personal Guard na -egbo mkpa a kpamkpam nefu. Xvirus Personal Guard na -enye gị nhọrọ nchekwa dị elu karịa ịrụ nyocha ọkọlọtọ na mwepụ nje. Akụrụngwa antivirus nwere nchedo oge na-enyocha sistemụ gị mgbe niile ma nyere gị aka iwepu nje a site na ịdọ gị aka na ntị tupu malware ọ bụla ebute kọmputa gị.
Site na njirimara nchekwa nje USB, Xvirus Personal Guard na -ejikwa osisi USB, nke bụ otu nime ụzọ nje nje na -emekarị, na -egbochi ibunye nje USB na -akpaghị aka. Mmemme nwere obere akụrụngwa nwere ike ịrụ ọrụ na -agwụ ike na sistemụ gị.
Rịba ama: Ị nwere ike ibudata Microsoft .NET Framework nke mmemme ahụ kwesịrị ịgba site na ebe a:
Xvirus Personal Guard Ụdịdị
Nha faịlụ: 1.96 MB
Mmepụta: Dani Santos